နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Reckless Road Trip
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Reckless Road Trip
ဖေါ်ပြချက်: သင်သည်သင်၏အဆွေတို့အဘို့ရှာဖွေအဖြစ်မဆင်မခြင်လမ်းခရီးစဉ်လိုက်တယ်မိကျောင်းနှင့်ဂြိုလ်သားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆန့်ကျင်သငျသညျတှငျး။ ဦးလေးအဘိုးက interdimensional လမ်းခရီးစဉ်အပေါ်လေးတွေတစည်းကို ယူ. ဖို့ပျော်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်ယခုသူကလေးတွေခြေရာခံပျောက်ဆုံးရဲ့အဖြစ်
ထိန်းချုပ်ရေး: Reckless Road Trip pits you against all kinds of weird monsters and aliens as you search for your friends. Uncle Grandpa thought it would be fun to takeabunch of kids on an interdimensional road trip, but now he's lost track of the kids, as well as his friends, Pizza Steve and Mr. Gus! Help Uncle Grandpa and Giant Realistic Flying Tiger fly through alien dimensions and bring everyone back to safety. Grab amazing power-ups like rapid shot, spread shot and laser to activate even more awesome attacks. Play Reckless Road Trip, more Uncle Grandpa games and other free online games
ကစား: 41,017 tag ကို: လက်ရေးရုပ်ပုံကြီး, ကာတွန်းကွန်ယက်ကိုဂိမ်း, ကာတွန်းဂိမ်း, Reckless Road Trip games, Uncle Grandpa games
အခုတော့တစ်ဦး Entrepreneur ဖြစ်ရန်သင့်အလှည့်ပါပဲ။ ကိုယ့်ကို Justin ကဲ့သို့သင်၏ကိုယ်ပိုင်လင်မနစ်ရပ်တည် Create နှငျ့သငျအမြတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လျှင်ကြည့်ရှုပါ။ ဒီဂိမ်းကိုသာ desktop ပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်။ Cha-Ching, Entrepreneur, Cha-Ching ဂိမ်းများ, Entrepreneur ဂိမ်းများ, cha Ching, ကာတွန်း networ